Google kwuputara Mmemme Nweta Ego $ 1B! | Martech Zone
Ọ bụ ọ bụghị ezi okwu, just jiko nri idide.
Metacafe, usoro ọchụchọ na ogo maka vidiyo, naanị karịrị $ 1,000,000 keere òkè na ya na ndị okike ọdịnaya. Mike na-akọ na Revver dakwara $ 1,000,000 na ntinye ego na afọ a.
M na-akatọ Mwakpo Google wakporo ndị na-eweta ọdịnaya ndị na-arịọ ịkwụ ụgwọ maka itinye ego. Michael Graywolf nwekwara… ọ bụkwa na-ewere weebụsaịtị buru ibu ịrụ ọrụ maka ịkwanye na Google Powers-That-Be.
Google na - ekwu na ọ na - anwa ịdebe nsonaazụ ọchụchọ ya n'ezie organic. Mpaghara isi awọ nke Usoro Usoro Ọrụ Google na-aga n'ihu na-agbachi, n'agbanyeghị. Kacha nso nso, Matt Cutts nwere ike ikwu na njikọ niile na nkwado nkwado ga-enwerịrị akara ngosi aha ya - ọ bụghị naanị ndị na-eweta njikọ akwụ ụgwọ.
Dịka otu n'ime 'ndị na-eweta ọdịnaya' ahụ, ana m elekarị njikọ akwụ ụgwọ ntakịrị. Dị nnọọ ka Metacafe na Revver siri mata na ha enweghị azụmaahịa bara uru na-enweghị ndị ọrụ metụtara, ikekwe Google kwesiri kwa.
Ọ bụrụ na Google dị oke mkpa maka iwepu njikọ akwụ ụgwọ, mgbe ahụ ha kwesịrị ịkekọrịta ego ha nwetara maka ọdịnaya m na-arụ na ha (site na iji mkpado ha na njikọ ha). Gini mere ịkwụghị m ụgwọ maka nnukwu ọdịnaya m na-ekwe ka Google nye ndị ọrụ ya?
Google enweghi intaneti, ndi be anyi. Ọ bụ ọdịnaya gị, ọ bụghị nke Google. Anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị wee nwee ike ilebara anya Google ọkara oge anyị ga-echefu nke a. Google emeela ezigbo ọrụ n'ịgbasa onwe ha 'karịa' onye ọ bụla na net.
Ikekwe ọ bụ oge maka Inyocha Nchọpụta ọhụụ nke nwere usoro azụmaahịa ọhụrụ?
Tags: digg onuogugunkọwa dmarcdofollowozi phishingọnụọgụgụ facebookgoogle tinyere omume igwe mmadụnjikọ jikọtara ọnụpinterest ọnụọgụgụreddit ọnụọgụ mmadụrel = muSliderusoro mgbasa ozi kacha mmammadụ mgbasa ozi igwe mmadụ ozi igwe mmadụmgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze
Dec 30, 2007 na 2:18 PM
Anụtụbeghị m banyere metacafe tupu enwe mmemme mmekorita m nụrụ banyere ịtụgharị usoro ntinye ego nke ọnwa a emere m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 40, nke karịrị karịa m mere na Google adsense gaa ọgụgụ. Ekwenyere m na google kwesịrị ịkekọrịta ọdịnaya maka nsonaazụ organic ma kwenye na ha kwesịrị monetize youtube maka mmadụ niile kama ịhọrọ mmadụ ole na ole ahọpụtara.
Dec 30, 2007 na 3:06 PM
M na-agụ ọtụtụ akụkọ ọjọọ mgbe ndị mmadụ na-eme mkpesa banyere iwu nkwụnye ụgwọ Google na nhazi ọkwa. '
Isiokwu a bụ naanị nke na-akọwa ọtụtụ ihe na-eweta ezigbo eziokwu.
N’akụkụ m ga-achọ ịkwado ihe niile ị na-ekwu.
Dec 30, 2007 na 4:28 PM
Ma Google ma Yahoo maka okwu ahụ agbanyela iwu nke ndị ọrụ na-erite naanị Google na Yahoo ọ bụghị obodo ndị ọrụ. O doro anya na ị ziri ezi… Ntanetị na ọdịnaya nke ndị ọrụ tinyere na ya bụ nke ndị ọrụ, ọ bụghị nke akwụkwọ ndekọ aha na nke injin ọchụchọ. Ihe ịma aka bụ na dịka ọ dị na mbụ, akụkụ ego bụ ihe na-eme ka sistemụ ahụ bụrụhaala na enwere ndị na-anwa iji ohere dị ngwa, ha ga-enwe aka karịa belụsọ gọọmentị unless okwu ọjọọ ahụ… nzọụkwụ na… .
Daalụ maka ikwu okwu.
Dec 30, 2007 na 6:23 PM
Ndị crows na-abịa n'ụlọ ha! Heh!
M na na-atụ egwu Google nwa oge!
Dec 30, 2007 na 6:32 PM
Ọzọkwa, dị ezigbo mkpa ebe a: akwụkwọ ọkacha mmasị m (mgbe ọ bụla)Iwu Ọhụrụ maka New Economy"Nke Kevin Kelley na-ekwu maka otu" ndị superwinners "si enweta" gburugburu ebe obibi-mmeri-nke kachasị "nke akụ na ụba netwọkụ na Isi nke 2 nke ị nwere ike ịgụ na ntanetị. Ọ (na akwụkwọ ahụ dum) bara uru ịgụ ya. Oh, BTW, edere ya tupu Google adị (ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ tupu ha amara nke ọma.)
Dee 2, 2011 na 2: 57 AM
Ikekwe, ọ bụ oge maka Inyocha Nchọpụta ọhụụ nke nwere usoro azụmaahịa ọhụụ? Anyị na-echefukarị etu esi adị ọhụụ na ọnọdụ ngbanwe ịntanetị dị. Echetara m na m na-ebe ákwá ụbọchị Northern Light mechiri ya n'ihu ọha search… na nke ahụ bụ naanị site na onye na-azụ ahịa. Ihe niile nwere ike ịbụ na nke a nwere olile anya, mana echere m na Google dị na "nnukwu ịda ada" otu… n'ihi na ị kwuru… ha bụ ndị isi n'ihi na ndị na-azụ ahịa "na-emeso" ha n'ụzọ ahụ… ha ji obi ụtọ na-akwụ ụgwọ. Ọ dị mma n'otu ụzọ ahụ ọha mmadụ si eche echiche oge niile - “ah, hapụ naanị ya ka m“ were nke m ”.. ma ọ nweghị ihe ị ga - eme banyere ya. Oke nwute. Daalụ maka isiokwu.
Dee 2, 2011 na 2: 59 AM